fanilihana trosa nateraky ny fidiran’ny filohany tany am-ponja amam-bolana maro. Anisan’ny hisantaran’izy ireo ny asa amin’izany ny fampidirina jiro sy rano fisotro madio ao amin’ny tanànan’i Soaniedanana misy ilay tetikasa fifindra-monina any amin’iny lalam-pirenena fahaefatra iny. Hotanterahina amin’io taona vaovao io ihany koa ny fanamboarana ilay cité 160 isa eny Antanandrano sy ny fizarana tany ho an’ireo olona mbola tsy manana izany. Tsy ho latsa-danja amin’ireo ny fijerena ny biraon’ny fikambanana etsy Anosizato izay fantatra fa hakarina asiana rihana. Hojerena manokana ihany koa raha araka ny fanazavan-dRafanomezantsoa Jean Nirina ireo zokiolona ahian’izy ireo mivantana miampy ireo ankizy mpirenireny tsy manam-piahy eny an-dalam-be. Na izany aza anefa ny asa sosialy miandry azy ireo dia hiezaka ny fikambanana hanome lanja hatrany ny asa fiarovana ny zon’olombelona niantsorohany hatramin’izay ka anisan’ireny ny fijerena ny olan’ny mpivady, ny fanoroana hevitra ireo Renim-pianakaviana hiharan’ny tsindry hazolena, ny resaka ady tany….